Maamulka & salaadiinta gobolka Mudug oo ka digay caafimaad darrada ka imaan karta xoolo weyd ah oo lagu qalo suuqyada Galkacyo. – Radio Daljir
Maamulka & salaadiinta gobolka Mudug oo ka digay caafimaad darrada ka imaan karta xoolo weyd ah oo lagu qalo suuqyada Galkacyo.
Abriil 30, 2010 12:00 b 0
Galkacyo Apr 30 ? Maamulka heer gobol, degmo, mas?uuliyiinta caafimaadka iyo qaar ka mid ah salaadiinta dhaqanka Puntland ee gobolka Mudug ayaa digniin wadajir ah ka soo saaray geela helibka ah ee lagu qalo magaalada Galkacyo, iyagoo ku taliyey in wax laga beddallo tayada xoolaha suuqa loo iib keenayo.
Digniintaan wadajirka ah ayaa ka danbaysay kaddib markii mas?uuliyiinta maamulka gobolka, kuwa degmada, taliyaasha laamaha nabadgalyada, mas?uuliyiinta caafimaadka ee gobolka iyo qaar ka mid ah madaxda dhaqanku ay maanta kormeer ku tageen suuqa lagu kala iibsado geelaha dibaaxa ah ee magaalda Galkacyo halkaasi oo ay ku arkeen geel badan oo dibaax ahaan magaalada lookeenay misna aan ku wanaagsannayn in loo qalo dadka caato iyo caafimaad darro awgeed.
In badan 60 neef oo geelka dibaaxa ah ayaa maanta ku sugnayd suuqa lagu kala gadto geela oo ku yaalla duleedka Waqooyi ee magaalada Galkacyo, kaasi oo badankiisa ay ka muuqanaysay caato iyo macaluul aad u badani, waxaana mas?uuliyiinta caafimaadka iyo kuwa gobolkuba ay isla qaateen in aysan habboonayn in hilib ahaan loo isticmaalo geelaan.
Duqa magaalada Galkacyo ee maamulka Puntland C/raxmaan Maxamuud Xaaji Xassan oo ka mid ahaa mas?uuliyiintii goobtaasi tagay, ayaa sheegay in aan loo baahnayn xilligaan geelaasi in lagu kawaamo magaalada sababo caafimaad darteed, wuxuuna ganacsatadii geelaasi suuqa keentay iyo dullaaliintiiba u soo jeediyey in geella qaar badan oo ka mid ah dib loogu celiyo halkii laga keenay si ay u soo cayilaan caafimaadkooduna u hagaago.
Duqu, waxaa u digay dadka ka ganacsada xoolaha, isagoo u sheegau haddii hadda kaddib ay suuqyada keenaan xoolo caato ah in laga qaadi doono tallaabo ku habboon.
Agaasimaha Cisbitaalka guud ee magaalada Galkacyo Maymuun Faarax Samatar oo ku hadlaysay magaca bahda caafimaadka ee gobolka Mudug, ayaa sheegtay in ay jiraan god-daloolooyin badan oo xagga caafimadka ah taasi oo ka imaanasay kawaanleeyda iyo dadka xoolaha keenaba, waxayna carabka ku dhufatay in aan la dhawrin nadaafadda goobta lagu iibinayo hilibka xoolaha, sidoo kalana uusan jirin wax lagu kaydiyo oo xilli dheer yaalla suuqyada.
Taliyaha qaybta bileyska ee gobolka Mudug Col. Muuse C/raxmaan Xasaasi, ayaa isna sheegay hadda kaddib in aan suuqyada la keeni karin geel dibaax ah oo aan la hubin cayilkiisa iyo caafimaadkiisa intaba, iyadoo lagu hubin doono koontaroolada magaalada.
Taliyuhu waxaa uu soo jeediyey geelaan dibaaxa ah ee caatada la-liitda in dib loogu celiyo deegaannadii daaqa lahaa ee laga keenay si ay u soo nafaqaystaan, wuxuuna ku tilmaamay in aysan marna macquul ahayn in bulshada loo qalo.
Yuusuf Sh Cumar Geeleed, oo isna ka mid ahaa dadka ka ganacsada geelka goob joogna ka ahaa kulanka maanta ayaa sheegay in uu soo dhawaynayo hadalka maamulka ayna ku dhaqmi doonaan, hase ahaatee wuxuu meesha ka saaray in ay jiraan wax caafimaad darro ah oo haysa xoolaha suuqa la keenay isagoo dhanka kale qiray jiritaanka caatada iyo macaluulsha ka muuqta xoolaha, taasi oo sabab u ah in laga shakiyo caafimaadka geela maadama ay caato la tiicayaan.
Waa markii ugu horraysay maamulka dawladda hoose iyo mas?uuliyiinta gobolkuba ay si wadajira ah uga hadlaan saxada iyo caafimaadka xoolaha lagu qalayo suuqyada magaalada Galkacyo gaar ahaan geelaha oo la iib-geeyo midba midka uu ka liito.
Naadiga PV10 oo ku guulaystay tartanka Puntland Premier League ee Malaysia.